यस्तो छ, अहिलेको चर्चित फिल्म ‘पद्मावत’ ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
यस्तो छ, अहिलेको चर्चित फिल्म ‘पद्मावत’ !
Posted by Milap Subedi | १३ माघ २०७४, शनिबार १६:५२ |
१३ माघ,काठमाडौँ । सञ्जय लीला भंसालीको विषयमा जब कुरा उठ्छ तब ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘गोलियों की रासलीला रामलीला’ र ‘बाजीराव मस्तानी’ जस्ता फिल्म आँखा अगाडि आउँछन् । नोभेम्बर २०१६ मा फिल्म ‘पद्मावती’ (पद्मावत) को छायांकन सुरु भएको थियो तबदेखि यो फिल्म इतिहासलाई लिएर विवादमा छ । लगातार भइरहेको विवादका बीच फिल्म २५ जनवरीबाट रिलिज भएको छ ।
फिल्मको कथा चर्चित कवि मलिक मोहम्मद जायसीको काव्य रचना ‘पद्मावत’ माथी बेस्ड छ ।
कलाकार : शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंह
निर्देशक : सञ्जय लीला भंसाली
संगीत : सञ्जय लीला भंसाली, सन्चित बल्हरा
निर्माता : सञ्जय लीला भंसाली, सुधांशु वत्स, अजीत अन्धारे
जनरा : हिस्टोरिकल ड्रामा
फिल्मको कथा १३ औँ शताब्दीबाट सुरु हुन्छ । पद्मावती (दीपिका पादुकोण) सिंघल राज्यकी राजकुमारी हुन्छिन् । उनको सुन्दरताको पूरा भारतमा चर्चा हुन्छ । एक दिन अचानक महारावल रतन सेन (शाहिद कपूर) को भेट पद्मावतीसँग हुन्छ । यस्तैमा यी दुई एकअर्काको प्रेम पर्छन् । यसपछि पद्मावती र रतन सेनको विवाह हुन्छ । सबैकुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा रतन सेनको दरवारबाट निकाला भएका पुरोहित राघव चेतनको भेट दिल्लीका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (रणवीर सिंह) सँग हुन्छ ।
उक्त पुरोहितले अलाउद्दीन खिलजीलाई रानी पद्मावतीको सुन्दरताको बयान गर्छ । पुरोहितको कुराबाट प्रभावित भएर अलाउद्दीन, चित्तौडमा आक्रमण गर्नका लागि निस्कन्छन् । खिलजीले झुक्याएर महारावल रतन सेनलाई बन्दी बनाउँछन् र बदलामा रानी पद्मावतीको माग गर्छन् । यसपछि फिल्ममा कयौं मोड आउँछ ।
फिल्ममा निर्देशक सञ्जय लीला भंसालीको मिहिनेत स्पष्ट देखिन्छ । उनले रानी पद्मावतीको सुन्दरतालाई आकर्षक तरिकाले देखाउन सफल भएका छन् । महारावल रतन सेनको पराक्रम र सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीको क्रूरता देखाउन पनि निर्देशक भंसाली चुकेका छैनन् । फिल्मको हरेक फ्रेममा भंसालीको जादू देख्न सकिन्छ ।
दीपिका पादुकोण, पद्मावतीको रोलमा एकदम फिट छिन् । शाहिद कपूरले महाराजा रावल रतन सिंह र एक जिम्मेवार पतिको भूमिका राम्रोसँग निर्वाहा गरेका छन् । यस्तै, अलाउद्दीन खिलजी जस्तो क्रूर व्यक्तिको भूमिका रणवीर सिंहले अद्भुत अन्दाजमा निर्वाहा गरेका छन् । रजा मुराद, अदिति राव हैदरी, जिम सर्भ, आयाम जस्ता कलाकारहरुको अभिनय पनि दमदार छ ।
फिल्मको म्यूजिक राम्रो छ । ‘घूमर’, ‘एक दिल एक जान’ र बाँकी गीतले फिल्मको स्क्रिनप्लेमा ठूलो सहायता गरेको छ । ब्याकग्राउन्ड स्कोर र युद्धको समयको साउन्डले फिल्मलाई थप वजनदार बनाएको छ ।
बलिउड भाष्करले ३.५/५, कोइमोइले ४.५, आजतकले ४, इन्डिया एक्सप्रेसले २.५ र टाइम्स अफ इन्डियाले ४ स्टार रेटिङसहित ‘पद्मावत’ पैसा असुल फिल्म रहेको लेखेका छन् । यो फिल्म संसारभर करीब ७ हजारभन्दा बढी ‘स्कृन’ मा रिलिज भएको छ । फिल्मको कूल बजेट १८० करोड रहेको छ ।
Previousआईसीसी विश्व क्रिकेट लिग : नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली युएई प्रस्थान
Nextप्रदेश नं २ मा सरकार बनाउन सक्रिय मधेश केन्द्रित दल !
दलित थर लुकाउन अर्कै थरको नागरिकता
२ असार २०७३, बिहीबार ०७:१६
२४ मंसिर २०७४, आईतवार ०८:१३
चीन भ्रमण फलदायी : सभामुख महरा
२७ भाद्र २०७५, बुधबार १४:०४
ट्युनिसियामा विरोध प्रदर्शन : दर्जनौँ घाइते, २०० जना पक्राउ
२७ पुष २०७४, बिहीबार ०८:३१